दुई वर्षमै दोब्बर भयो खाने तेलको मूल्य – BikashNews
दुई वर्षमै दोब्बर भयो खाने तेलको मूल्य
२०७८ भदौ २४ गते १६:४० समुन्द्र घिमिरे
काठमाडौं । नेपालमा कोभिड महामारी सुरु भएयता खाने तेलको मूल्य आकाशिएको छ । सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण नेपालमा फैलिएको भन्दै लागू गरेको लकडाउनपछि खाने तेलको मूल्यमा उच्च बृद्धि भएको हो ।
सरकारले कोभिड संक्रमण फैलन नदिनेभन्दै २०७६ को चैत ११ गतेदेखि देशभर बन्दाबन्दी जारी गरेको थियो । नेपाल खुद्रा व्यवसायी महासंघको तथ्यांक अनुसार बन्दाबन्दी (लकडाउन) पछि काँचो तोरीको तेल प्रतिलिटर १ सय रुपैयाँ, भुटेको तोरीको तेल प्रतिलिटर १४० रुपैयाँ र सनफ्लावर तेल प्रतिलिटर १०५ रुपैयाँले बढिसकेको छ । यो तथ्यांक २०७६ जेठ ३१ देखि गत भदौ १० गतेसम्मको हो ।
२०७६ फागुनदेखि २०७८ को भदौ १० गतेसम्ममा खाने तेलको मूल्य दोब्बर भएको छ ।
२०७७ को जेठ ३१ मा प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ रहेको काँचो तोरीको तेलको मूल्य गत भदौ १० गते बढेर प्रतिलिटर २६० रुपैयाँ भएको छ । यो अवधिमा काँचो तोरीको तेल प्रतिलिटर एक सय रुपैयाँले बढेको छ ।
यस्तै, २०७६ जेठ ३१ गते प्रतिलिटर २२० रुपैयाँ रहेको भुटेको तोरीको तेल गत भदौ १० गते प्रतिलिटर ३६० रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा सबै भन्दा बढी मूल्य बढेको भुटेको तोरीको तेल प्रतिलिटर १४० रुपैयाँले बढेको हो ।
नेपाल खुद्रा व्यवसायी महासंघका अनुसार २०७६ जेठ २ गते भटमासको तेल प्रतिलिटर १३५ रुपैयाँ थियो । गत भदौ १० गते सो तेलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर २४० रुपैयाँ भएको छ । यो अवधिमा भटमासको तेल प्रतिलिटर १०५ रुपैयाँले बढेको छ ।
काँचो तोरीको तेल रु. १६० बाट २६० (१०० रुपैयाँले बढ्यो)
भुटेको तोरीको तेल रु. २२० बाट ३६० (१४० रुपैयाँले बढ्यो)
भटमासको तेल रु. १३५ बाट २४० (१०५ रुपैयाँले बढ्यो)
सनफ्लावर तेल रु १४५ बाट २५० (१०५ रुपैयाँले बढ्यो)
यस्तै, २०७६ जेठ १० गते प्रतिलिटर १३५ रुपैयाँ रहेको सनफ्लावर तेल गत भदौ १० गते बढेर प्रतिलिटर २४० रुपैयाँ भएको छ । यो अवधिमा सनफ्लावर तेलको मूल्य प्रतिलिटर १०५ रुपैयाँले बढेको छ ।
कोभिड संक्रमणको जोखिम भएको भन्दै सरकारले गरेको बन्दाबन्दी हटेर बजार सामान्य अवस्थामा आएको समयमा तेलको मूल्य उच्च भएको हो ।
विभागको कारवाहीपछि बढ्यो मूल्य
कोभिड महामारीपछि तेल उद्योगीले मूल्य बढाएको गुनासोपछि बजार अनुगमनको नियामक निकायको रुपमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले तेल उद्योगको अनुगमन गरेको थियो ।
२०७७ को माघ पहिलो साता विभागले उद्योगमा नै गएर अनुगमन गरेको थियो । अनुुगमनपश्चात बारामा रहेका २ तेल उद्योगले बढी मूल्य लिएको भन्दै विभागले कारवाही स्वरुप ३ लाख नगद जरिवाना गर्दै मूल्य घटाउन निर्देशन समेत दिएको थियो ।
विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाई बजार अनुगमका क्रममा उत्पादन लागतको अनुपातमा बढी मूल्य लिएको भेटिएपछि बारामा रहेको अन्नपूर्ण भेजिटेवल प्रालि र महालक्ष्मी सोल्भेन्ट एण्ड रिफाइनरी प्रालिलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारवाही स्वरुप तीन/तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको बताउँछन् ।
अनुगमनका क्रममा अस्वभाविक रुपमा बढाइएको खाने तेलको मूल्यबृद्धि सच्याउन निर्देशन दिइएको छ भने निर्देशनको पालना नगरे कानून अनुसार थप कारवाही हुने चेतावनी विभागले दिएको थियो । विभागले मूल्य घटाएर नयाँ मूल्यसूची समेत पठाउन निर्देशन दिएपनि ती २ उद्योगले मूल्य घटाएका थिएनन् । विभागले २ पटकसम्म ताकेता गर्दा समेत कुनै जानकारी नदिएपछि विभागबाट कुनै फलोअप समेत भएको छैन ।
विभागले हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा तेल उद्योगको अनुगमन गरेपछि उद्योगीले ठूलो मात्रामा मूल्य बढाएको पाइएको छ । खुद्रा व्यवसायी महासंघको तथ्यांक अनुसार २०७७ को मंसिरको तुलनामा चैत महिनामा तेलको मूल्य उच्च रुपमा बढेको हो ।
खुद्रा व्यवसायीहरु विभागले बजार अनुगमन गरेपछि व्यवसायीले मूल्य बढाएको बताउँछन् ।
विभागको फितलो बजार अनुगमनका कारण तेल उद्योगीहरुले आफूखुशी तेलको मूल्य बढाउने गरेको खुद्रा व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रवित्रकुमार बज्रचार्य बताउँछन् । उनले विभागले अनुगमन गरेर मूल्य घटाउन निर्देशन दिएपनि उद्योगीले पत्रमा मात्र घटाएको जनाउँदै झन मूल्य बढाएको बताउँछन् ।
उद्योगीको पुरानै जवाफ
पछिल्लो समय खाने तेलको मूल्य फेरि बढ्न थालेपछि विभागले केही दिनअघि तेल उद्योगीसँग छलफल गरेको थियो । १९ तेल उद्योगका प्रतिनिधिसँग विभागले गरेको छलफलमा उद्योगीले कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा प्रशोधित तेलको मूल्य बढेको बताएका थिए ।
विभागका प्रवक्ता सेढाईका अनुसार सो छलफलमा उद्योगीले पुरानै कुरा (अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कच्चापदार्थका मूल्य बढ्दा बढ्यो) गरेका थिए ।
उद्योगीले छलफलमा बनावटी कुरा गरेको भन्दै विभागले तेलको कच्चा पदार्थ आयातको विवरण लिएको र त्यसमा उद्योगीले तोकेको मूल्य माग गरेको थियो । सो विवरण हेरेर थप अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
अहिले तोरीको तेल उत्पादन गर्ने उद्योग करिब ८ वटा छन् भने वनस्पति घ्यू तेल (भटमास तथा सनफ्लावर तेल लगायत) उत्पादन गर्ने उद्योग करिब २० वटा छन् ।
सीसीडी रेसियो न्यूनतम ८५ प्रतिशत कायम गर्न चेम्बरको माग
तीन महिनामै थपियो उद्योगमा १ खर्ब २२ अर्ब
किसानका पीडा: के खाएर बाँच्ने होला ?